DEG DEG: Guardiola Oo Go’aan Ka Qaatay Dacwadii Ay Kusoo Ogeen Xiriirka Kubada Ingiriiska %
DEG DEG: Guardiola Oo Go’aan Ka Qaatay Dacwadii Ay Kusoo Ogeen Xiriirka Kubada Ingiriiska
EnglandFalanqeyntaLatest Sports News
Tababaraha kooxda kubada cagta Pep Guardiola, ayaa wuxuu aqbalay dacwadii ay kusoo ogeen xiriirka kubada cagta Ingiriiska, ee loosoo gaabiyo FA, taasoo salka ku haysa Maradii Jaalada ahayd, taasoo uu ku xirtay Jaagadiisa.
Pep ayaa wuxuu cadeeyay in sababta uu usoo qataay Maradaan ay tahay inuu ku muujinayay sida uu uga xun yahay Siyaasiyiin ay dowlada Spain ku xirixirtay Gobolka Catalonia, halkaasoo ah meel uu asal ahaan kasoo jeedo.
Sikastaba, dacwad oogayaasha FA-ga ayaa waxay ku doodeen in macalinka Sky Blues uu ku xadgudbay shuruudka Premier League, oo ay kamid tahay in siyaasada aan lagu soo dhex-mili karin kubada cagta.
Sida laga soo xigtay, Shabakada Sky Sport ee dalka Ingiriiska, kooxda kubada cagta Man City ayaa waxay warqad ay uqortay FA-ga, taasoo jawaab u ah dacwada lagu soo oogay macalinnkeeda waxay ka bixiyeen raali gelin.
Waxay balanqaadeen in uusan soo xiran doonin din dambe, waxaana taasi cadeyn u ah in uusan wadan Pep maradaan kulankii ay 1-0 ku garaaceen dhigooda Chelsea, taasoo ka tirsaneed Premier League.
Kulankaan wuxuu qatay Pep Ubax kaasoo uu kusoo dhegsaday meeshii ay Maradii Jalaada ahayd ku xirneed, isagoona ku muujiyay Ubaxaas sida uu uga xun yahay Geerida ku timid Haweeneyda Marie Curie, taasoo Kansar uu dilay.
Guardiola, ayaa wuxuu watay Marada jaalaha ah labadii kulan ee xiriirka ahaa, kuwaasoo ay dardareen Arsenal, islamarkaana ka kala tirsanaa horyaalka Premier League iyo waliba Final-ka koobka League Cup.
Saraakiisha Manchester City ee warqadda uqoray FA-ga waxay muujiyeen sida ay ugu farax-san yihiin in xiriirka kubada cagta uu diyaar uyahay in la ilaaliyo shuruucda udegan, iyagoona balanqaaday wada shaqeyn fiican.
Warqad jawaab u ahayd toodii hore, ayaa Sky Blues, madaxdooda waxaa loogu sheegay in aanan laga ogolaan doonin Pep inuu ku dhex xirto kulamada Ingiriiska Calaamo uu ku muujinayo wax Siyaasad la xiriir, sida ay Sky Sport sheegtay.
Iyadoo ay taasi ka walaacsan tahay Man City ayaa waxaa loo ogolaaday in Pep uu ku xiran karo Marada Jaalaha ah wax ka baxsan 90-ka daqiiqo ee ciyaarta, iyadoona Pep Guardiola, uu umuuqdo mid sii wadi doona xeradiisa Maradaan.
EPLFAGuardiolaMan CityPep GuardiolaPremier League
Hadii Ay Dheeli Doonan Modric Iyo Kroos & Shirka Jaraa’id Ee Zidane Ka Hor Kulanka PSG Ee UCL
Man Utd Oo Kaalinta 2aad Ee EPL Kusoo Laabatay Kadib Markii Ay Garaaceen Crystal Palace